ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ရိုဟင်ဂျာ အခွင့်အရေး ကုလ တိုက်တွန်း
နိုင်ငံတကာ သို့ နေရပ်- အကြံပြုလွှာ :
၁သိန်း ၄သောင်း မှာ ကျားက ၆သောင်းထား။ သက်ကြီးရွယ်အို + ခလေးက ၂ သောင်းထား။ အိမ်ထောင်ပြုနိုင်တဲ့အရွယ်က ၄၀၀၀၀ ။
မယား ၁ယောက် ၊၂နှစ် ခလေး ၁ယောက်မွေး ၊ ၁၀နှစ်မှာ ၅ယောက် ။
မယား ၄ယောက် နှုန်း ၊ ၁၀နှစ် မှာ ခလေး ၂၀။
၄၀၀၀၀ x ၂၀ = ၈၀၀၀၀၀ ( ၈ သိန်း)။
၁၀နှစ်မှာ မူလ ၁၄၀၀၀၀ + ၈၀၀၀၀၀ = ၉၄၀၀၀၀ ။
အကြံပြုချက် - အဲဒီ ၁၄၀၀၀၀ကို တောင်ကိုးရီးယားမှာ ၁၀နှစ်ထားပါ။ ၁၀နှစ်ပြည့်တဲ့အခါ ကုလသမဂ္ဂ က အဆိုပြုတဲ့ ၁၄၀၀၀၀ ကို မြန်မာနိုင်ငံသားပြုဖို့ စဉ်းစားပါမယ်။
Dec 31, 2014 04:18 PM
UN always follow OIC will, But never think about suffering of Burmese and how those illegal Bangalis against the law and traditions. then UN never tell not to violate the Burmese constitution, not to insult BURMA, never, never......
Dec 31, 2014 10:40 AM
သူတို့ ကိုချစ်ရင် လာခေါ်သွားလိုက် ဘာမှမကန့်ကွက်ဘူး။ ဒို့ကတော့ လက်မခံနိုင်ဘူးဟေ့။
Aung Aung နေရပ်- U.S.A. :
Dear RFA, We clearly declare that this solution is unacceptable. This is the problem from Bangladesh's population explosion. We never accept them without immigration process. This issue is illegal problem. Their native country is Bangladesh.
Right man :
UN is not for only one country or one group. UN must be fair. UN must represent all countries.
Kyaw နေရပ်- USA :
This resolution is definitely created the huge problem and it has made too dangerous for Burma's national security, territorial integrity and sovereignty. We strongly oppose this resolution becos it is totally dishonest! This is an illegal solution!
Dec 31, 2014 09:55 AM
Dec 31, 2014 03:22 AM
တရုတ်က “သူများပြည်တွင်းရေးကို ၀င်မစွက်ရေး”မူကို ကိုင်စွဲထားတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဗီတိုအာဏာနဲ့ ပယ်ချရမှာပေါ့။
Dec 30, 2014 08:38 PM
ကုလသမဂ္ဂကတော့ “ မီးလောင်ရာ လေပင့်” ၊ “မြွေပူရာ ကင်းမှောင့်” ၊ “သူခိုး ဓါးရိုးကမ်း” ၊ ကုလားသိုက် ကျားကိုက်” အောင် လုပ်နေပြန်ပြီ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ တောင်ကိုးရီးယားနယ်စပ်မှာ ရှိနေရင် ဘန်ကီမွန်းက ဒီလို အော်သံပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
Dec 30, 2014 02:40 PM